MESA 17.1.2 inouya pamwe 70 inovandudzwa yeLinux yemitambo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo MESA 3D yekuvandudza Juan A. Suarez Romero anga achitarisira kuzivisa iyi nyowani kuburitswa iyo yakagadzirira kurodha pasi. Iyi ndiyo yechipiri yekugadzirisa yekuvandudza iyo vhezheni yaive nayo Matafura 17.1 3D Graphics Raibhurari pane iri rakagadzikana bazi. Idzi inhau dzakanaka dzekuvandudzwa kwemifananidzo muLinux, uye pamusoro pazvo zvese zvinokanganisa avo vanoda mitambo yemavhidhiyo uye vanoshandisa iri rakavhurika sosi yemifananidzo raibhurari yatakataura nezvayo zvakanyanya mublog iri pane dzimwe nguva ...
MESA 17.1.2 inosvika chete mavhiki maviri mushure mekuburitswa kweshanduro 17.1.1, asi kunyangwe iri pfupi nguva yekuvandudza inosvika yakasimba, nekuti haina chayinoshandisa hapana uye hapana pasi pe 70 shanduko dzakapinda mune yavo changelog iyo inobata avo vanoshandisa AMD neIntel GPUs kusimudzira ruzivo rweava vashandisi. Haisi iyo isingakoshese huwandu hwekuvandudza, pane zvinopesana, huwandu hwakanaka hweavo vanobatana neyese nzira yekuvandudza iyo chirongwa ichi chakaitwa mumakore mashoma apfuura.
Dzimwe shanduko dzakaitwa ndedzekugadzirisa matambudziko madiki anowanikwa mushanduro dzakapfuura, senge mamwe ane chekuita nendangariro, Intel i965 chipsets, RadeonSI (GFX9), Freedreno, R100, R200, uye Radeon RADV Vulkan madhiraivha. Sekuona kwedu, maGPU akabatanidzwa muSoCs enhare mbozha akakwanisawo kunakidzwa nendangariro, senge idzo dzinoshandisa machipisi e Qualcomm uye kuti muzuva rayo vaive veAITI (ikozvino iri ye AMD uye kuti vari kuzvidemba kuvaendesa kune hofori Qualcomm vachiona kubudirira).
Masisitimu ese anoshandisa MESA 3D anozobatsirwa neshanduko idzi, mazhinji acho, sezvatakataura, anogadzirisa bug, ayo asingangobatanidzi GNU / Linux chete, asiwo mamwe maratidziro anoenderana neLinux kernel iyo inoshandisawo MESA, zvakadai sezvo Iyi inyaya yeGoogle yeGoogle, uye mimwe inokanganisa inozivikanwa graphic server Wayland, iyo inoitirwa kutsiva iyo X yakaoma. Izvo zvakati, kana iwe uchida kudhawunirodha yazvino vhezheni yeMESA 3D neshanduko idzi kusimudzira yako grafiki stack, unogona kuzviita kubva kwakasiyana masosi. Uye kuti uwane rumwe ruzivo mu webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » MESA 17.1.2 inouya nemakumi manomwe ekuwedzeredza emitambo yeLinux